Fipoahana mahery vaika tany Beyrouth – Liban : tsy latsaky 3 miliara dolara no tomban’ny fahavoazana | NewsMada
Fipoahana mahery vaika tany Beyrouth – Liban : tsy latsaky 3 miliara dolara no tomban’ny fahavoazana
Nihovitrovitra i Beyrouth, Renivohitr’i Liban, ny 4 aogositra hariva teo. Fipoahana vanja mahery vaika indroa niantoana. Mihorohoro ny tanàna, mijoalajoala ny afo, midonaka ny setroka, potika ny trano, vaky ny fitaratra, mirehitra ny fiara ….izany no tranga ao Beyrouth any Liban, nahafatesana olona tsy latsaky ny 100, maratra 4000, tsy manan-kialofana 300 000. Io ny trangana fipoahana mahery vaika mitovitovy tamin’ny 11 septambra 2001 tany New-York, Etazonia.
Vanja mahery vaika milanja 2750 t (nitrate d’amonium) no nipoaka tamin’io fotoana io. Tsy fantatra na asa fampihorohoroana na loza tsy nahy ny nahatonga izany. “Mety noho ny fitahirizana io vanja mahery vaika io nandritra ny taona maro izao loza izao”, hoy ny talen’ny fiarovana any an-toerana, i Abbas Ibrahim. Nanamafy ity tompon’andraikitra ity fa mbola mandeha ny fanadihadiana hahafantarana marina ny tena antony.
Avy hatrany ry zareo Frantsay, namonjy voina any an-toerana, nandefa miaramila, fanafody, sy fitaovana. Ho tonga any mihitsy anio ny filoha frantsay, i Emmanuel Macron, hidinika miaraka amin’ireo tompon’andraikitra samihafa. Ny Covid-19 ity mbola tsy ahitana fanafana, miampy izao loza hafa izao indray, tsy ny ho avin’i Liban irery no ahina amin’izany, hoy ny any Frantsa. Firenena maro hafa, toa an’i Etazonia, Iran, maneho ny firaisankinany manohana an’i Liban.